Randrianasoloniaiko voafidy tamin’ny Ird tao Toliara fa ilaina ny fihainoana ny hevitry ny hafa satria lalàna no iadian-kevitra ao. Ilaina ihany koa ny manaja ny hevitry ny sasany. Misy antoko maro anefa ao toy ny Ird izay manana ny maro an’isa, ny tsy miankina tsotra ary ny tsy miankina izay nanohana fitondrana, ary ny TIM. Tena hisy ny adihevitra ary eo ihany koa no tena hipetrahan’ny fitoniana sy hisian’ny demokrasia, satria samy voafidim-bahoaka avokoa ireo solombavambahoaka ireo. Ny talata 16 jolay ho avy izao no fivoriana voalohany ataon’ireto solombavambahoaka ireto hifidianana ny birao maharitra sy ny filohan’ny Antenimierampirenena ary ireo depiote manana ny maro an’isa no hanendry izay ho filoha eo, hoy i Siteny.